Indawo yokuhlala yaseRohini - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseRohini
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguBir
Iphuculwe ngobuhle obumangalisayo iRohini yenye yezona ndawo zizayo zabakhenkethi ezizayo kule ndawo, ubuhle bendlela ejikelezayo negcinwe kakuhle enombono omangalisayo oyijikelezileyo kuye kwavuthuza iingqondo zabakhenkethi abaninzi abahamba besiya kwiQueen of Hills ngendlela yaseRohini. .
Kufuphi negadi yepaki (Shiv Temple)
Rohini Road endleleni eya Kurseong kunye Darjeeling West Bengal India
Umninimzi uBir Thapa
Qhagamshelana.9733235769, 7908662108 (whats apps)
Uhambo olufutshane kumahlathi ashinyeneyo eLama Goemba kufutshane neRohini lunokuba luhambo lokwenyani kubathandi bendalo. Eli lelinye lawona masimi amadala eTeak kulo mmandla kwaye induli inembonakalo engwevu eyahlukileyo ngenxa yobubodwa bezityalo zayo.
IDudhia elunxwemeni loMlambo iBalason, indawo yepikiniki eyaziwayo, yimizuzu eli-15 kuphela ukusuka apha. Amahlathi aseBamanpokhari nawo akufuphi, apho unokuhamba khona uhambo olufutshane. Yonwabela ubuhle obungapheliyo benduli kunye nommandla othafa ngelixa undwendwela iRohini.
Ziva impepho epholileyo ngelixa usondla amehlo akho ngombono omangalisayo weSiliguri ejikelezwe ngumlambo ojikelezayo kunye nembono yeentaba eziphakamileyo eziluhlaza ezibambe iKurseong ukusuka kwinduli yeRohini.
Ukuhamba kwindlela ye-Rohini kwimo yenyoka kunye namagophe ahlukeneyo kunye nokugoba okuye kwanika umdla ingqondo yabahambi abaninzi ngelixa abambalwa abanethamsanqa baye babona ezinye iindlovu zasendle zepikoko kunye nezinye izilwanyana zasendle zibonakala s ecaleni kohambo oluya kule ndawo ibukekayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Bir
Ngesabelo sebhasi okanye ukugcina iteksi kunye neevili ezi-2